Chikumi 26, 2018 arun
Yahoo inosanganisira BTC kuti USD zvokutengeserana anoshanda mune zvetsika wemari mushumo
A idzva Yahoo mushumo rinosanganisira mazita "sarudza mumatanda zvemari" akadai American Express, Prudential Financial uye JP Morgan Chase uye ichi pasi kunosanganisira zvakawanda crypto-kuti-USD zvokutengeserana maviri akadai Bitcoin kuti USD.
The kwebasa rinofanira cryptocurrencies vane tsika mumatanda chikamu normalizing zvinoitwa digitaalinen mari yesangano.
Yahoo! ndiro yechitanhatu pakukura websites munyika uye wechisere kupfuura iri US, maererano Alexa.
Statistica inoshuma kuti ave July 2015, Yahoo! vakanga zvinofungidzirwa 151.2 miriyoni pamwedzi yakasiyana vashanyi kubva US.
Pharma Zirume Merck patents uchishandisa blockchain yokukurira kunyepedzera meds
Merck anotsvaka munhu bvumidzwa kushandisa blockchain kuti club zvinhu sezvo vachifambira kuburikidza romugove cheni.
Chinangwa pano rinorambidza counterfeiting.
Merck anoti ayo pakunamata kuti mabikirwo “runoita yakachengeteka, zvakavimbika kuchengetera pakuverenga zvabuda dzakakwirira kwazvo mashoko kuvimbika, zvakadai kuti chaizvoizvo zvisingaiti havarongi kana vadzime kana zvimwe tamper kana kurasikirwa mashoko akadai, e.g. nokuda kupedzisira kana nemaune deletion kana nokuda nemashoko uori.”
Korean Exchange vhinza anoisa $ 620K zvemadhenari crypto pangozi
A Exchange South Korea kunobva kwaita nokusaziva leaked tisanzwe ruzivo pamusoro 19 vanoita ayo, vanokwanisa kuisa $620,000 zvemadhenari cryptocurrency pangozi.
An mushandi Bitkoex, kuchitsinhanisa yakatanga kufamba muna May, anamira email kero, chikwama kero, uye pasiri makiyi kuti KRM zviratidzo munhoroondo yavo mumagariro nevezvenhau dzevakurukuri, izvo zvinogona kubvumira munhu ane ruzivo kuvhura midziyo. Kambani vaiti hapana zvinhu zvave akarasika.
Andreessen Horowitz anotangazve $ 300M crypto mari
Nesilicon Valley mari Powerhouse Andreessen Horowitz (a16z) akaita yakatanga itsva $300 miriyoni Fund pfungwa cryptocurrency.
The mari uchanzi “a16z” uye achaita zvikurukuru iine vaimbova yeUnited muchuchisi uye Assistant US Attorney Kathryn Haun somumwe yayo co-anotungamirira. Haun yavewo zita sezvo kambani yacho ichangobva talk mudiwa.
General nemumwe Chris Dixon akaratidza crypto mari Zvaizoda Zviri refu chipini mune upfumi zvahwo.
Dixon akapfuurira kuwedzera:
“Tinoda rubatsiro dzinofambiswa ne crypto protocols kushandiswa nemazana emamiriyoni uye pakupedzisira mabhiriyoni evanhu,” Dixon akanyora. “Crypto zviratidzo ndivo chizvarwa twa kirasi digitaalinen network, asi kukosha kwavo rinosundwa chichikonzera, rinoshanda anoshandisa zviitiko.”
Kraken Daily Market Mushumo 25.06.2018
$162M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Next Post:Blockchain News 27.06.2018